Hiran State - News: Xukumada Farmaajo ma noqon sidey moodayeen shacabka Somaliyeed
Xukumada Farmaajo ma noqon sidey moodayeen shacabka Somaliyeed
Topnews:(hiranstate.com)- Kedib kulan ay golaha wasiirada TFGda ku yeesheen magaalada Mogdisho qo,aanada laga filanayeyna ay aheyd sidii shacabka Somaliyeed ee macaluusha u dhimanayo loogu gargaari lahaa iyo sidii caasimada Somaliya iyo guud ahaan koofurta Somaliya looga dhigi lahaa meel nabdoon ayey waxey ka dhaman waayeen waqtiga ha naloo kordhiyo.
Waxaan aad uga xumaha nolosha malaayiinta Somaliyeed ee maanta qarka u saaran macaluusha qaarkoodna ayba hada haraad iyo gaajo u dhinteen in kooxdii qurbaha ka tagtay ay maanta shacabku arkayaan midabkooda rasmiga ah. wasiir Xooshoow ayaa yiri intii dhiman laheyd lagama celin karo dhimasho laakinse waxa aanu aragno oo ay indhaheenu qabanayaan ma ahan wax loo adkeysan karo.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wato ayaa yiri gumeysi kor kaaka yimid waxii aad kala kulanto la yaab ma leh, laakinse kuwii loogu yeerayey aqoonyahanada ee mudada fog qurbaha ku noolaa ee wadamadii ay ka yimaadeeen nidaamka iyo kala danbeyn ku soo argay hadeyba maanta heerkaan ka mareyso ninkastow madaxaada meyrax ku duubo inta hogaamiye wadani ah laga helay ayuu yiri Amb Xooshow.
Marka laga soo tago hadalka wasiirka warfaafinta HS hadane xukumada Farmaajo waxaa wadamada horey u maray markaad joogto loogu yeeraa magacyo badan oo ay ka mid yahiin.
1- Daneysta yaal aan war iyo wacaal u heyn nolosha ay shacabka Somaliyeed ku nool yahiin oo tooda oo kaliya ilaashanaya.
2- Waxaa loogu yeeraa xukumadii Ribada oo waxey dhul gaalo ku leeyahiin guryo ay ribo ku socoto.
3- Aqoontooda iyo ficiladooda ismalahan oo waxa ka maqan qibrad ayey leeyahiin shacabka intooda badan.
ma ahan wasiirka warfafinta oo kaliya Somalida aaminsan in shacabka Somaliyeed u baahan yahiin hogaamiye wadani ah oo dantiisa ka hor mariya mida guud,waxaana hadalkaasi ka dhawaajiyey madaxweynahii hore ee Somaliya Cqaasim oo maanta la hadlayey warbaahinta sheegayna in Somaliya u baahan tahay hogaamiye wadani ah oo dalka iyo dadka horumar gaarsiiya, isagoo inta badana hogaamiyaashii dalka soo maray ku tilmaamay kuwo dantooda u cararayo oo midii guud iska iloobay.
Hadaba maqaaladeen danbe waxaanu kaka hadli doonaa mushaarka bishii ku baxa Xukumada Farmaajo halka shacabkii gaajo iyo haraad u dhamaanayaan kedibna isweydii in wadanka ay ka jirto xukumada wadani ah amaba mid danteeda eeganeysa.
· admin on April 25 2011 12:09:34 · 0 Comments · 1989 Reads ·
14,613,752 unique visits